शुक्रबार लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पूजा गर्नाले मिल्छ यस्तो लाभ (पूजाविधि सहित) – Sanchar Patrika
July 3, 2020 249
काठमाडौं- आज शुक्रबार हिन्दूधर्मावलम्बीले सन्तोषी माता र वैभव लक्ष्मीको उपासना गर्दछन् । शुक्रबारको दिन सन्तोषी माता र लक्ष्मीको पूजाआराधना गरे घरमा धनका साथै समृद्धि हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ ।
माता लक्ष्मीको व्रत बसी विधिवत रुपमा पूजा आराधना गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । जसले जीवनभर तपाईंको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यो दिन व्रत लिने व्यक्तिले फलाहारका रुपमा चना र सख्खर प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ ।
व्रतमा अमिलो खानु ठूलो त्रुटी हुनेछ । साथै यस दिनमा लक्ष्मी माताका अवतार अन्नपूर्णेश्वरी माता र दुर्गा भवानीको पनि पूजा गरिन्छ । यीनीहरुको व्रत विधि भने अलग–अलग हुन्छन् । यो दिन सेतो कपडा लगाउनु पर्छ । शुक्रबार घरमा खीर बनाएर गरिबलाई बाँड्नाले घरको भण्डार भरिने विश्वास छ ।
शुक्रसँग सम्बन्धित रत्नको दानले पनि लाभ मिल्नेछ । यस वस्तुहरुको दान शुक्रबारको दिन सन्ध्या कालमा कुनै युवतीलाई दिनु उत्तम हुन्छ ।
शुक्र ग्रहसँग सम्बन्धित दशाले समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने शुक्रबारको दिन व्रत बस्नु पर्दछ ।
Prevशुक्रबार कुबेर यन्त्रको पूजा गर्नाले मिल्छ धन लाभ (पूजा विधिसहित)
Nextगेटाफेविरूद्ध रियल मड्रिडको संघर्षपूर्ण जीत
यी जोडिले सार्वजनिक पार्कमा आफूलाई रोक्न नसकेपछि….
बिहानै खाली पेटमा मनतातो एक गिलास पानी पिउदा हुन्छन यस्ता चमत्कारीक लाभ
दाङमा दुनियाँ रुवाउने घटना : ख्याल नगर्दा ३ बच्चाको एकै ठाउँ मृ;त्यु [ सचेत रहनुहोस् ]
भारतबाट सलह नेपाल छिर्दै, अब अर्को भयावह चुनौती थपिने ! (6242)
१८ साताकी गर्भवती महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि, जङ्गलमा लगेर यसरि गरियो दाहसंस्कार (2659)